Nagu saabsan - Xiamen Haida Co., Ltd.
Macno malahan inaad tahay wax iibsade yar ama wax iibsade badan, waxaad naga heli doontaa xalka ugu badan ee xirashada xirfadaha iyo adeegga aad u fiican.
Waxaan kuu xaqiijineynaa xirfadeena xirfadeed, qiimaha tartanka iyo tayada sare.
Aqbal labada amar ee OEM iyo ODM. Kooxdayada qaabeynta khibrada leh waxay ku siin doonaan xal xirmo xirfadle ah.
Marka loo eego nidaamka maamulka ISO, waxaan xakameynaa tayada si adag alaabta ceyriinka ah illaa wax soo saarka dhammaaday.
Waxaan leenahay in ka badan 25 sano oo khibrad warshadeed ah oo arimahan ku saabsan waxaanan leenahay koox adeeg xirfadeed leh iyo koox farsamo.